အုပ်စုလိုက်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များ | Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | applications များ
ကျနော်တို့ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆက်လက် ယနေ့ခေတ်အတင်းအဓမ္မအိမ်တွင်းအကျဉ်းချထားမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသောလျှောက်လွှာများနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံပြုချက်များ။ နည်းပညာနှင့်လူမှုကွန်ယက်များ၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အိမ်တစ်အိမ်စီမှဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ WhatsApp နှင့်အခြား messaging app များသည်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။
ဒါပေမယ့်အဆက်အသွယ်ပို။ ပင်မှန်ကန်စေရန် ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွေနဲ့တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရစေသည်တစ်ခုခု။ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် quarantine အခြေအနေသည်အိမ်တွင်စတင်ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံမှုများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသည်အမီလိုက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မျက်နှာများကြည့်။ ကောင်းသောအချိန်ပေးပါ။
1.2 Google က Hangouts ကို
ဒီနေ့မင်းတို့ယူလာပြီ သင်လွတ်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်အောင်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေ။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်များအနက်၎င်းတို့ကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေများသို့မဟုတ်သူတို့ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူမှုတို့ကြောင့်ရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်သင်သည်မလျောက်ပတ်ဘဲနေလိမ့်မည်။ အိမ်မှသင်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်ဖြုန်းနိုင်သည်.
ကောင်းမွန်သောအချိန်ရှိခြင်းအပြင်အုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်လျှောက်လွှာများ၊ သူတို့က ukoll ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအလုပ်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဥပမာတယ်လီဖုန်း ဆက်၍ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း။ ချုပ်နှောင်မှုစတင်ကတည်းကဤအပလီကေးရှင်းများပေးထားသောအခြားအသုံးပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည် (အိမ်မှ) ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အားကစားသင်တန်းများဆက်လက်တက်ရောက်ရန်.
ဤအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ရမည် လူတိုင်းအသုံးပြုသော app။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်း WhatsApp သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲခဲ့သည် အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မသိခဲ့ပါကအုပ်စုဖွဲ့ခေါ်ဆိုမှုများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထိုသို့မှန် WhatsApp မှတဆင့်အုပ်စုဖွဲ့ခေါ်ဆိုမှုသည်ပါဝင်သူအရေအတွက်အရအတော်အတန်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုရှိသည် တစ်ချိန်တည်းမှာတက်ကြွစွာ။ ဘုံခေါ်ဆိုမှုကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည် သုံးယောက်ထက်ပိုသောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူ တစ်ပြိုင်နက်တည်း။ ထို့ကြောင့်လူသုံးယောက်မှလေးယောက်ဖြင့်ခေါ်ဆိုပါက၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီးမည်သည့် application ကိုမျှ install လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ရေးသားသူ: WhatsApp ကို Inc က
Google က Hangouts ကို
၎င်းသည် Google ၏ကိုယ်ပိုင် application ဖြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ်လူအများတို့သည်ထိုအရာကိုယုံကြည်ကြသည် မသိဘဲသူတို့ရဲ့ဖုန်းများပေါ်တွင် installed ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောဂူဂဲလ်အထုပ်၏အက်ပ်များအတွင်း။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုလျှောက်လွှာအဖြစ်ပceivedိသန္ဓေယူ ကြောက်စရာကောင်းသော WhatsApp နှင့်တူချင်ပေမယ့်သိသာထင်ရှားသောလျှပ်တစ်ပြက်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့သော်လည်းဂူးဂဲလ်သည်၎င်းကို၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ဆက်လက်ထားရှိခဲ့သည်။
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Hangouts ကို messaging application တစ်ခုအဖြစ်ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင်ရှိနေပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာဗီဒီယိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ app နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်များကို အသုံးပြု၍ လူ ၁၀ ယောက်အထိတစ်ပြိုင်နက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ချဲ့ထွင်နိုင်ဖြစ်ခြင်း သုံးစွဲသူအကောင့်ရှိလျှင်လူ ၂၅ ယောက်အထိ.
နောက်ထပ်ထောက်ခံချက် သင်သည်မည်သည့် application ကို install စရာမလိုဘဲသုံးနိုင်သည်။ ထိုအရာ၌ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ မည်သည့် website ကိုမဆို သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ် desktop မှသင်တိုက်ရိုက်စကားပြောနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင်ရှိသည့်ဆာဗာများ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်မှုများ၌အသံနှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးကောင်းမွန်စေသည်.
ယခုတွင်ငါသည် Apple ၏ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာနှင့်အတူသွားပါ။ ဤအမှု၌သော App တစ်ခု Apple ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone, iPad သို့မဟုတ် MacBook ကိုအသုံးပြုလျှင် မည်သည့်လျှောက်လွှာကိုမျှတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ အပို, သို့မဟုတ်မည်သည့်အစီအစဉ်ကို download လုပ်ပါ။ Google နှင့် Hangouts ကဲ့သို့ပင် FaceTime ကို Apple ID နှင့်အသုံးပြုနိုင်သည် အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးစရာမလိုဘဲ
ဤကိစ္စတွင် Apple ၏ကိုယ်ပိုင် application အများအပြားကဲ့သို့ ၎င်းကို iOS ဂေဟစနစ်မှထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းနှင့် / သို့မဟုတ်လည်ပတ်မှုစနစ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏အသုံးဝင်မှုကိုများစွာကန့်သတ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုဖြစ်လာရင်လူတိုင်းမှာပန်းသီးထုတ်ကုန်တွေရှိရင်၊ တက်ကြွစွာပါဝင်သူ (၃၂) ဦး သည်စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုတည်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း။
ဤနေရာတွင်သင်ဝယ်ယူနေသည့်လျှောက်လွှာကိုတွေ့ရသည် သိပ်မကြာသေးမီလများအတွင်းအလွန်ကောင်းသောကျော်ကြားမှု။ ဒီအိမ်တွင်းအကျဉ်းချ၏ဤရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ ဤအမှု၌၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုချဲ့ထွင်တဲ့ပေးဆောင်ဗားရှင်းရှိကြောင်းအခမဲ့ App ကို။ အခမဲ့ဗားရှင်းဖြင့်ပါဝင်သူ ၁၀၀ အထိဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်အမှုပေါ် မူတည်၍ အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းတွင်အသုံးပြုမည့်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ အကန့်အသတ်မရှိ၊ အများဆုံးပါဝင်သူအရေအတွက်မှာတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန် လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းအပြင်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုမိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။ ကျန်တဲ့ Apps တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသစ်အဆန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်အသံဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်.
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွက်အခြားဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခု ဒါဆိုရင်, GoToMeeting သည်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မှမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စတိုးဆိုင်များသို့ခုန်ချခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့၏စာသင်ခုံများတွင်ရှိနေသောကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ချက်ဖြင့်မွေးဖွားခြင်း။ GoToMeeting သည်စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကဖြစ်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အားလုံးလိုပဲ၊ မည်သည့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမျိုးကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒါဟာရှိပါတယ် တချို့ကန့်သတ်နှင့်အတူ "အခမဲ့" ဗားရှင်း, နှင့်စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုစီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်သုံးစွဲသူအရေအတွက်သည်အစည်းအဝေးစီစဉ်သူမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအကောင့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ နှင့် ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကို ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စမတ်ဖုန်းထက်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များတွင်အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ Desktop ပေါ်မှ GoToMeeting သို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်တစ်ခုကိုလည်းသင်လိုအပ်သည်။ သော်လည်း မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှသင်ဖိတ်ကြားထားသောအစည်းအဝေး၏အိုင်ဒီကိုထည့်ပါ၊ ၎င်းကိုသင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပဲသုံးနိုင်သည် ယခင်
GoToMeeting - ဗွီဒီယိုတွေ့ဆုံခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများ
ထုတ်စစ်ဆေး အဆိုပါ quarantine များအတွက်အကောင်းဆုံးဂန္ဂိမ်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » applications များ » အုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များ